Amiirka Qatar oo Ruushka kala hadlaya qalalaasaha Suuriya – Radio Daljir
Maarso 26, 2018 4:40 b 0
Amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa gaaray magaalada Moscow oo uu ku tagay booqasho gaaban, waxaana la filayaa inuu madaxwaynaha dalka Ruushka Vladamir Puntin uu kala hadlo dagaalada Suuriya, Yemen iyo Falastiin.
Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dad badan ay kasoo qaxayaan bariga magaalada Guuta ee u dhow caasimadda Suuriya ee Dimishiq, waxaana dadku ay u baxsanayaan meelaha ay mucaaradku ay ka talin ee ay joogaan ciidamada Ruushka.
Sida uu sheegayo Dmitriy Frolovsky, falanqeeye saldhigiisu yahay Moscow Putind iyo Sheekh Tamim ayaa kawada hadli doona mowqifka laga qaadanayo madaxwaynaha Suuriya Bishaar Al-Asad, Qatar inay taageerto mucaaradka iyo ka qaybgalka dowladda Qatar ee qorshaha dib u dhiska Suuriya ee la wado.
“Waxaa si cad kala qaybsanaan ay uga jirtaa gudaha Suuriya, iyadoo dhinacyada ugu awooda wayn ee Suuriya jooga sida Ruushka, Mareykanka, iyo Qatar ay ku kala aragti duwanyihiin hanaanka xasilinta Suuriya” ayuu yiri Frolovsky oo arimaha siyaasadda ka faalooda.
Bishii Janaayo kulan ay maalgalisay Ruushka oo xal loogu raadinayay xisaadda Suuriya ayaa lagu fashilmay in la isugu keeno dowladda iyo muacaaradka, kadib markii xoogag taageeesan Asad oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay weeraro ku qaadeen qaybta mucaaradka ay maamulaan ee bariga magaalada Ghouta.
Sheekh Tamiim ayaa kulan qadka taleefanka kula yeeshay ariimka Abuu Dubay bishii March iyo boqor Salmaanka Sacuudiga horaantii bishii Febraayo.
Amiirka Qatar ayaa booqashadiisa dibadeed ee xigta la failayaa bisha April , isagoona la kulmaya madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump.
Laba Qarax oo kadhacay Muqdisho